श्रीमान मेरो पक्षलाई हदै सम्म सजाय गरियोस-NepalKanoon.com
-अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली, एल.एल.एम. अपराध कानून, संबैधानिक कानून
कानून ब्यवसायी भएर अपराधीलाई जसरी पनी संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हैन हरेक अवस्थामा उनिहरुका हक र कानूनी सिद्धान्तको पालना, अनुसन्धान अभियोजनमा हुने त्रुटिहरु, प्रमाणको भार लगायतका कुराको विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफल हुन र सो अनुरुप हुन आवाश्यक छ । यस्तै कुराहरुको पक्ष विपक्षका कानून ब्यवसायी र न्यायधिस विचको विहड०्गम छलफल नै न्याय वा सत्य निरुपणको आधार हो ।
यस तहको बहस पैरविको लागि न्यायधिसमा यस्ता कुरा सुन्ने र फैसला गर्दा विधिशास्त्रिय र विहड०्गम छलफललाई आधार वनाउने हो भने न्यायलयको सुन्दरता कानून ब्यवसायीको उचाई र न्यायधिसहरुको इज्यत सम्मान उचिएर जान्छ । अहिलेको सवालमा पनी सबैमा त हैन कतीपय न्यायधिसको फैसला काविलता र कला हेर्दा पेशा छोड्न मनलाग्छ ।
कुनै मुद्दा उल्टी हुनु भनेको स्वभाविक प्रकृया मात्र हैन तल्लो तहको अदालतको असक्षमता र दयनियता पनी हो । सैदान्तिक ब्याख्या नजिर वन्ने हिसावले उल्टिहुनु स्वभाविक हुन्छ तर अन्य अवस्थाको सुल्टि र उल्टीमा न्याय प्रणालिका सवै पक्षका योग्यताले दाँत देखाइरहेको हुन्छ । यो भन्दैमा हाल विकराल रहेको सु.स. (सुरु सदर वा तल्लो अदालतको फैसला मिलेको मथिल्लो तहको अदालतको फैसला) अदालतको रुपमा विकाश हुदै गएका उच्च र सर्बोच्च अदालत पनी सतर्क भएर सु.स. फैसला संस्कार हैन की प्रमाण अनुकुल वा वास्तविक न्याय भएको छ वा छैन मा नै केन्द्रित हुनु पर्दछ ।
मैले भएको घटना पाठ सिकौ भनेर भन्न अनुमती लिए:
एक मुद्दामा कुनै एक जिल्ला अदालतका कुनै न्यायधिसले एक अभियुक्त बिदेश बसेको समयमा नेपालमा अपराध गरेको दावी साथ पेश भएको अभियोग भएको मुद्दामा उस्ले अपराध गरेको ठहर गरे । सजाय निर्धारणको बहसमा मैले अफ्नो पक्षलाई सरकारी वकिलको बहस र माग दावी बमोजिम हदै सम्म सजाय गरिपाउँ श्रीमान भनी वहस गरेको सम्झनामा आयो । जो मुद्दामा इजलासमा नै लामो दोहोरो रस्साकस्सी भएको थियो ।
अभियुक्त भनीएका मानिस बिदेश भएको निजको राहादानीमा स्पस्ट खुलेको थियो, जो उपर फैसलाले कुनै सन्देह वोलेको छैन तर करिव २ बर्ष बिदेश वसेको मानिसले नेपालमा आफु बिदेश रहेको अवधीको विच तिरको समयमा अपराध गरेको मागदावी ठिक छ भन्दा मलाई कसैलाई चित् बुझ्ला नबुझ्ला तर खास जेलसजाय र जरिवाना तिर्नुपर्ने पक्षलाई अदालत प्रती कस्तो छाप पर्यो मलाई खास पिर परेको पक्ष त्यो पनी थियो ।
कानून ब्यवसायी पनी अदालतको इज्यत संग जोडिएको इज्यत बोकेर हिड्ने पेशाकर्मी बर्गन हो । मैले बहसको क्रममा बेन्चमा नै भनेको थिए श्रीमान तपाईको यो फैसलाले मेरो पनी इज्यत बोक्छ, वताउछ अती भएकोछ तसर्थ यस्मा यसै नमिलेको उसै नमिलेको हदैसम्म को कैद र जरिमाना गरौ अव । बहस ब्यड०्गात्क पनी थियो ।
आफु नै बेन्चमा वसेर बहस सुनी कसुर कायम गरेको थाहा पाएको पक्षले पनी म संग भनेको थियो, यस्तो बतासे पारामा अदालत फैसला गर्छ भन्ने मैले सपनामा सोचेको थिइन । यस्तो प्रमाण हुदा, अनुमान गर्ने अवस्था समेत नहुदा पनी अपराध कायम हुन्छ भने म यस्तै न्याय प्रणाली भएको देशको नागरिक भएर जन्मिएछु जेल बस्छु सर भनेको थियो । उसले सजाय निर्धारणको बहसमा हजुरलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गनुृहोला ।
मैले श्रीमान संग हदै सम्म कैद र जरिवाना गर्न भन्दै बहस गर्दा मलाई श्रीमानवाट कन्टेम्ट अफ कोर्टको टिप्पणीको कुरा पनी गर्नु भयो र मैले भने श्रीमान यस्तै न्याय दिदै हिड्नु पर्दा, यस्तै हो भने यो कानून ब्यवसाय गर्न इच्छा छैन पनी तै तै वरु आजिवन ब्यवसाय गर्न नपाउने गरी शिफारिष गरिवक्सियोस यसमा मेरो पनी कल्याणछ भने ।
उहाँको अर्को तर्क थियो तपाई पुनरावेन पनी जान सक्नु हुन्छ त ? मैले भने मलाई पेशा हैन श्रीमान मलाई मेरो अदालतवाट जहाँ स्पस्ट छ, जहाँ देखिन्छ त्यही न्याय चाहियो ।
पक्षहरुको रोधन, पिडा, खुसी, दाउ, जे भए पनी सत्य कुरा चै कानून ब्यवसायिलाई मात्र थाहा हुन्छ नकी श्रीमान वा सरकार वादी मुद्दाको सवालमा सरकारी वकिललाई । विभिद कारणले उनिहरुको हैसियत पुनरावेदन जाने थिएन त्यसकारण त्यहि फैसला अन्तिम मानी सजाय स्विकार गर्नु विकल्प रहेन । यसरी एक फितलो फैसला अन्तिम भएर देशका नागरिकामा अदालतको न्यायमा फरक दर्शन सिकाएर त्यहि फैसला कार्यन्वयन भयो ।
यो उदाहरण कसैको मानमर्दन गर्न हैन, यस्तो बुझाई बुझ्नु आफै छोटो हुनु हो । यो गल्ति त्रुटीहरुको पहिचान गरी भएका कमि कम्जोरी सच्चाउने अवसर हो ।
यो आलेखले म आफु पनी अदालको इज्यतको आडमा रहेको इज्यत बोकेर हिडेको मान्छे आफैलाई पुनः लेख्न मन छैन र अवसर नमिलो पनी ।
न्यायधिस अति सम्वेदनशिल जिम्मेवारी हो, जस्मा कलमको निफको मसिमा अदालतमा जोडिएका हरेक पक्षको गम्भिर अर्थ राख्ने भविश्य जोडिएको हुन्छ ।
न्यायधिसले प्रयोग गर्ने कलममा नै अदालत र अदालत संग जोडिएका हरेक पक्षको पेशागत मर्यादा र इज्यत जोडिएकोछ त्यो भएर झन यो महत्वपूर्ण र कानून ब्यवसायिको पनी चासोको बिषय हो ।